Valve moto, Pneumatic Actuator Valve & Solenoid Valve Manufacturer
Eletriki Actuator Valve
Eletriki bọọlụ Valve
Eletriki Butterfly Valve
Ụdị obere bọọlụ bọọlụ moto
Eletriki Gate Valve
Eletriki Globe Valve
Eletriki Control Valve
Pneumatic bọọlụ Valve
Pneumatic Mma Gate Valve
Pneumatic Angle oche Valve
Ebumnuche General Solenoid Valve
Solenoid Valve anaghị egbochi mmiri
Ọkwa nri Solenoid Valve
Valve Solenoid dị elu
Nrụgide Solenoid Valve
Solenoid Valve na-egbochi corrosive
Solenoid Valve nwere ngụ oge
Solenoid Valve na-egbochi mgbawa
Valve akwụkwọ ntuziaka
Valve nru ububa aka
Valve bọọlụ akwụkwọ ntuziaka
Ọnụ ụzọ Valve
Valve na-ebelata nrụgide
Katalọgụ &Akwụkwọ data
Ogo & Asambodo
Ihe ọmụma gbasara Valves
Ọkachamara nke Valve akpaaka
Na-enye ihe ngwọta valvụ otu nkwụsị iji mejupụta mkpa valvụ gị
Ihe ngwọta valvụ na-akwụsị otu nkwụsị iji mezuo mkpa valvụ gị.
Ihe ngwọta valvụ na-akwụsị otu nkwụsị iji mezuo mkpa valvụ gị
valvụ egosipụtara COVNA
Na-enye ụdị ọ bụla nke actuator Valves maka nhọrọ gị
Ọkụ eletrik Actuator
COVNA electric actuator valves dị na bọọlụ / nru ububa / ọnụ ụzọ / valvụ ụwa iji gboo mkpa valvụ gị.
COVNA pneumatic actuator valves dị na nloghachi mmiri na ụdị ihe na-eme ihe ugboro abụọ maka mkpa gị.
Ndị nrụpụta akpaaka
COVNA akpaghị aka actuator dị na igwe ọkụ eletrik na pneumatic actuators maka mkpa gị.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ COVNA valvụ?
Iji bụrụ onye na-eduga nrụpụta nke Actuator Valve
Ngwakọta ngwaahịa zuru oke
Ọrụ Nhazi Valve
Ngwọta Ekebere Ekebere
Ọrụ Nkwụsị Ịzụta
Nkwado nka na ụzụ na akwụkwọ
Dị ka otu n'ime ndị na-emepụta valve na China, COVNA nọ na-ekwusi ike na R & D, imewe na mmepụta nke valves kemgbe 2000, na ịgbasa usoro ngwaahịa ya iji gboo mkpa nke ụlọ ọrụ dị iche iche ma nyere ụlọ ọrụ aka dozie ngwọta nchịkwa usoro.
Na mgbakwunye, anyị na-enyekwa ọtụtụ usoro ihe nrụpụta valvụ iji gboo mkpa mmegharị gị. Ndị na-eme ihe dị iche iche na-enyere gị aka ịghọta njikwa anya ma melite ntụkwasị obi injinia.
Anyị maara na mgbe ụfọdụ valvụ ndị a na-emekarị nwere ike ọ gaghị adị mma maka ụfọdụ ngwa pụrụ iche. Ya mere, anyị na-enye ọrụ nhazi valve maka ngwa gị iji hụ na valvụ ahụnwere ike inye ngwọta nchịkwa mmiri dị mma maka ọrụ gị.
Ihe karịrị afọ 20 nke ahụmahụ valve enyerela anyị aka ịghọta nke ọma mkpa nke ụlọ ọrụ dị iche iche. Anyị ga-adabere na ụlọ ọrụ ma nye gị ngwọta mmiri nke a na-akwa akwa. Ebumnobi anyị bụ inyere ọrụ gị aka imeziwanye nrụpụta mmepụta na ebuli atụmatụ uru.
Anyị maara nke ọma na a ga-ezute ọtụtụ nsogbu na usoro ịzụ ahịa, dịka ụzọ ịkwụ ụgwọ, ngwa agha, mkparita uka na ihe ndị ọzọ. COVNA nwere ahụmịhe karịa afọ 20 na azụmaahịa zuru ụwa ọnụ. Na mgbakwunye na inyere ndị ahịa aka ịhọrọ valvụ kwesịrị ekwesị na ndị na-eme ihe, anyị ga-agbalịkwa ike anyị niile iji nye ndị ahịa oge na-echekwa usoro nnyefe ngwaahịa.
N'otu oge ahụ, COVNA nwere ụlọ nkwakọba ihe 2, nke nwere ike ịzaghachi mkpa valvụ gị ngwa ngwa ma nye ọrụ nnyefe ngwa ngwa.
COVNA nwere ntọala mmepụta 3 na ụlọ nkwakọba ihe 2. Anyị na-agba mbọ ịnye ndị ahịa ọrụ nnyefe ngwa ngwa. N'otu oge ahụ, anyị ọkachamara ahịa otuga-enyere aka na-edobe usoro ịzụ ahịa maka gị iji hụ na ọrụ gị adịghị egbu oge.
Anyị na-agba mbọ ịnye gị ọmarịcha ọrụ. Iji nyere gị aka ịghọta nke ọma njirimara nke valvụ ma jiri valvụ ahụ mee ihe nke ọma, anyị ga-enye gị nkwado ọrụ ntanetị na nkwado akwụkwọ n'efu. Na-atụ anya inyere gị aka ka ọrụ gị na-aga nke ọma.
Asambodo bụ ụzọ kacha mma iji gosipụta ogo ngwaahịa. Anyị nwere ISO9001: 2015, CE, SGS, TUV, FDA na karịa 30 patent. Usoro mmepụta nke ngwaahịa ọ bụla ga-agbaso ụkpụrụ mba ụwa.
Mmekọrịta na COVNA
Nwee obi ụtọ n'ọrụ anyị wee nyere rọketi azụmahịa gị aka
Maka onye ọrụ njedebe na onye ọrụ nkwekọrịta
Nkwenye nke Ogo ngwaahịa
Ụkpụrụ mmepụta nke mba ụwa na ule na-eme ka arụmọrụ ngwaahịa ahụ sie ike
Nkwado nka na ụzụ iji nyere gị aka dozie ngwọta ahụ
Ngwọta Mmiri Omenala Maka Gị
Anyị ga-elekwasị anya na mkpa gị ma nye gị azịza nke ahaziri ahazi
Maka ndị nkesa
Ịkekọrịta ozi ahịa
Ịkekọrịta ozi ahịa na gị iji nyere gị aka ịgbasa ọnụ ọgụgụ azụmahịa gị
Ọzụzụ Ọmụma Ngwaahịa na Nzaghachi ngwa ngwa Mgbe-Sales Service
Ọzụzụ ngwaahịa na-enyere gị aka inweta ntụkwasị obi nke ndị ahịa. Ma anyị ga-aza ngwa ngwa iji nyere gị aka na-edozi nsogbu mgbe-ahịa
Nkwalite atụmatụ uru yana nkwado ike
Ọnụ ahịa asọmpi iji nyere gị aka inweta nnukwu uru. Ikike mmepụta dị elu iji nyere gị aka hụ na ngwa ahịa na-eme ka azụmahịa gị dịgide
Mee ka Valves gị ahaziri n'enweghị iwu kacha nta.
Ụlọ C, Longchang Micro-Chuangyuan, Nke 26 Hantang Street, Dongcheng District, Dongguan, China
Valves ụlọ ọrụ